बाँदरले झम्टिँदा आशिर्वाद ठान्ने हामी ! - Mitho Khabar
June 20, 2022 mithokhabarLeaveaComment on बाँदरले झम्टिँदा आशिर्वाद ठान्ने हामी !
काठमाडौं। पछिल्लो समय तपाईहरुले देखिरहनु भएको होला समाजिक सञ्जालमा एउटा बादरले आर्शिबाद दिएको सम्झिदै जेल भित्रको बादरको हातबाट आफ्नो कपाल बादरलाई दिएको । पछिल्लो समय यस्तो छटक दिनानुदिन बढिरहेको छ र बादर हेर्ने र आर्शिबाद लिनेहरुको घुईचो नै लागिरहेको छ ।
पशुपतिनाथको मन्दिर ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थल हो। यहाँ पर्यटक र भक्तजनको भिडभाड सधैँ नै हुने गर्छ। पशुपतिको आफ्नै विशेषता छ । अहिले पशुपतिको सूर्यघाट नजिकै रहेको पवन(बादर)को दर्शन गर्न पनि उत्तिकै
भिड भाड बढन थालेको हो। केही दिन यता सामाजिक सन्जाल मार्फत भाइरल बनेको उक्त बादरले भक्तजनको शिरमा हात राखेर अर्थात आशीर्वाद दिने गरेको भन्दै भक्तजनको भिडभाड बढेको गरेको हो। बिभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरिएको ।